Ucwaningo Luthi ... | Imithombo Yezindaba Yezamabhizinisi Amancane
NgeSonto, ngoJuni 12, i-2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 ULorraine Ball
Ukukhuluma nosomabhizinisi abancane ngezinkundla zokuxhumana kubonakala sengathi intshisekelo ekhulayo kulomxhumanisi njengoba beqala ukususa imisebenzi yezokumaketha ngaphandle kwezendabuko baye kwezokuxhumana.
Imiphumela yethu yokuqala evela kwinhlolovo yethu yezokuxhumana ibonakala ikhombisa abanikazi bamabhizinisi, abesilisa nabesifazane bachitha isikhathi esiningi ezinkundleni zokuxhumana nsuku zonke. (Abesilisa basebenzisa ngisho nangaphezulu kunabesifazane). Lokhu ukushintsha okukhulu kusuka onyakeni owodwa owedlule lapho senza isifundo sethu sokuqala.
Imigqa ebomvu nebomvu ikhombisa imiphumela yocwaningo lwethu lwango-2010. Njengoba ukwazi ukubona, cishe uhhafu wabo bonke abesilisa nabesifazane abaphendula ku-survy yethu bathe bachitha ngaphansi kwemizuzu engama-30 ngosuku ezinkundleni zokuxhumana. Kulo nyaka, imigqa eluhlaza okwesibhakabhaka netiye ikhombisa ngokusobala ukushintshela esikhathini esithe xaxa esichithwa kumanethiwekhi omphakathi. Cishe u-50% wamadoda abikayo achitha isikhathi esingaphezu kwehora elilodwa ngosuku
Ngenkathi ithakazelisa, umbuzo wangempela: Kuyasebenza? Idatha ibonakala ikhombisa ukuthi iyi-. Yize ngaphezulu kwengxenye yabaninimabhizinisi ocwaningweni lwalo nyaka besakhombisa ama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana angaphansi kuka-5% wokuthengiswa kwabo ngokuphelele, kusobala ukuthi kunezinkampani ezithola impumelelo ethile.
Yini abayenzayo ukukhiqiza ukuthengisa? Kuzofanele ulinde yonke idatha ezohlanganiswa ukuthola.
Okwamanje, uma ungakalitholi ithuba lokubamba iqhaza, manje yisikhathi esihle, ucwaningo luzothatha kuphela imizuzu embalwa, kanti abaphendula ngokwengeziwe bayothakazelisa imiphumela. Uma uqedela ucwaningo, ngizokuthumelela ikhophi lephepha elimhlophe elisha uma selishicilelwe.
Thatha iSurvey Manje
Futhi uma ungathanda ikhophi yamaphepha amhlophe esifundweni sangonyaka odlule, ungakuthola lapha:
UJun 13, 2011 ngo-2: 54 AM
Inhlolovo enjengale iyasiza kakhulu futhi iyasiza futhi noma ngubani angabamba iqhaza ngoba imithombo yezokuxhumana ikuyo yonke indawo nakuwo wonke umuntu. Kepha-ke, bengivele ngivakashele indawo ehlobene nayo efingqa umbiko wezibalo wabesilisa nabesifazane abasebenzisa imithombo yezokuxhumana futhi umphumela uba ukuthi abesifazane abaningi basebenzisa isikhathi esiningi kunabesilisa. Kodwa-ke, njengoba ngikhumbula ukuthi ibikhuluma ngenye i-niche hhayi ngezinjongo zokumaketha ngebhizinisi ezinjengalezi. Siyabonga ngolwazi.